I-Semalt Expert Digital ichaza ukuthi yiziphi iziphambeko ezingu-404 ezibhekisela ku-SEO
Yini ebangela ukuthi 404 ayitholakali amaphutha? Ingabe bazolimaza isikhundla sami?Le mibuzo ilokhu ihlala engqondweni yeziphathimandla zezinhlamvu uma kufika "amaphutha angu-404".
Uma ikhasi lakho libuyisa amaphutha angu-404, ukuphazamiseka kusongelaku-UX (isipiliyoni somsebenzisi). Njalo lapho isivakashi sithola iphutha 404, uyaphoqeleka ukuba abuyele futhi abuyele emuva, okuyintokusho ukushiya ikhasi lakho. Kubanikazi bama-brand noma abathengisi be-digital, amaphutha abangela ukwethuka uma bebonaAmathuluzi we-webmaster. Ukuze ugweme lezi zinkinga, uMichael Brown, iMenenja Yempumelelo Yekhasimende Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi,hlola ngokucophelela lokho okushiwo amaphutha angu-404 ku-SEO yakho nokuthi ungasusa kanjani ithonya labo elingathandeki.
Indlela yokuthola amaphutha angu-404?
Sebenzisa amathuluzi we-Google Webmaster
Lena enye yezindlela ezinhle kakhuluukuthola amaphutha ngqo kusuka ku-Google - motorhome apprisal. Udinga kuphela ukungena kumathuluzi wakho we-webmaster, iya ku-Crawl bese uchofozaIziphambeko zokukhwabanisa. Wonke ama-URL alahlekile azovela kusigaba esingatholakali. Ungakwazi ngisho ukuhlola igrafu ye-amaphutha ngokuhamba kwesikhathi ukuhlaziywa okungcono.
Abatholi abaxhumanisi abahlanganisiwe
Namuhla, kunezandiso eziningi zesiphequluli ngisho namahhalaamawebhusayithi afana ne-Validator.w3org nokuhlola izixhumanisi zami. Lezi zizobona kalula izixhumanisi eziphukile kuwebhusayithi yakho.
Ukusebenzisa i-Screaming Frog SEO Spider
Ngokufanayo namathuluzi weWebmaster, SEO Spider ikusiza ukuba ubone wonke ama-404 angatholakali amaphutha.Landa uhlelo lokusebenza. Faka SEO Spider bese ufaka iwebhusayithi yakho, bese uchofoza Crawl. Amaphutha angu-404 azovela kusimoIthebhu yekhodi..Ungaphinde uthumele umbiko njengefayela le-.csv.
Yiziphi amaphutha angu-404 ashoyo ku-SEO nokuthi kungani udinga ukwenza ngokushesha?
I-Google iyazisa ukuthi ama-404 angatholakali amaphutha ngezinye izikhathi angenakugwema.Ngakho-ke, iwebhusayithi yakho ngeke ikhanselwe noma ihlawulwe. Noma kunjalo, ngoba ukugxila okuyinhloko kwe-Google kuletha ikhwalithi,i-SEO yakho ingase ihlupheke kakhulu. Njengoba ama-bots e-Google adlala izixhumanisi zangaphakathi zekhasi lakho, uzobekwa uphawu njengeqembuhhayi nesithakazelo ekuhambiseni isipiliyoni esingcono somsebenzisi. Ngokuhamba kwesikhathi, i-Google izoyeka ukukhahla amakhasi akho futhi ithrafikhi izokwehla kakhulu.
Abathengisi kufanele bakhathazeke kabanzi mayelana nokusabelaamaklayenti esikhundleni se-Google bots. Kuzivakashi zakho, imbangela yephutha ayinandaba nhlobo, ukuthi yini abayithandayoukuthola okuqukethwe abakufunayo. Izivakashi eziningi zivame ukuhamba kwiwebhusayithi ehlukile, landela umncintiswano noma uphume. Lokhukusho ukulahlekelwa komgwaqo ngoba iklayenti ayikwazi ukuthatha isinyathelo esilandelayo ekuqondeni ukuguqulwa. Ngenxa yalokho, kuhlale kuhlakaniphilekuwe uthola amaphutha ngokushesha futhi ulungiselele ngendlela esheshayo.
Indlela yokulungisa amaphutha angatholakali angu-404?
Uma kwenzeka amaphutha angu-404, kuyadingeka ukwenza lula amaklayenti ukuba abuyele ekugezeni.
Sebenzisa ukuvuselelwa okungapheli kuka-301
Uma ikhasi elithile lisusiwe noma lisuswa,I-301 iphinda iqondise usizo lokuxhumanisa ikhasi kuya elisha. Ukuqondisa kabusha okungu-301 kuhle ngoba abalahlekelwa yigunya lekhasi kusuka ekhasini langaphambilini.
Ifayela le robots.txt lisetshenziselwa ukutshela iGoogle bots ukuthiamakhasi akhethekile asusiwe futhi awuhlosi ukuba akhishwe. Lena indlela enhle yokubhekana nephutha 404 uma kuningikwamakhasi asusiwe.
Ukulungisa okungafani kwamakhasi akho
Uma usebenzisa amathuluzi weWebmaster, ungakwazi ukubona kalulaamakhasi anezixhumanisi eziphukile. Hlola lamakhasi eduze ukuze uqinisekise ukuthi isixhumanisi asifakiwe kahle futhi siwalungise ngokushesha.